တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်၏ အဆိုအမိန့် ကောက်နုတ်ချက်များ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ ဆီနီဂေါနိုင်ငံ ဒက်ကာမြို့တွင် ကျင်းပရန်လျာထားသော ၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (FOCAC) ဖိုရမ် ဝန်ကြီးအဆင့် ကွန်ဖရင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တက်ရောက်ကာ မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ကာလရှည်ကြာပြီဖြစ်သော တရုတ်-အာဖရိက ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် နှစ်ဖက်ကြား ကျယ်ပြန့်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလားအလာကို အကြိမ်များစွာ အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတရှီ၏ မှတ်ချက်များမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။– တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိကတို့သည် နှစ်ပေါင်းပေါင်းများစွာတလျှောက်လုံး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စာနာနားလည်မှုနှင့် ကူညီမှု တိုးပွားလျက်ရှိသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အကျိုးရှိသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ သိသာခြားနားသောလမ်းကြောင်းပေါ် အတူတကွစတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
— တရုတ်-အာဖရိက ဆက်ဆံရေးသည် လက်ရှိ၌ သမိုင်းကြောင်းတွင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် FOCAC ပေကျင်း ထိပ်သီးအစည်းအဝေးက နယ်ပယ်များစွာ၌ လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွင်းသို့ ကြံ့ခိုင်မှုအသစ် ဖြည့်သွင်းပေးရန် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အတူ တရုတ်-အာဖရိက ချစ်ကြည်ရေး တိုးတက်မှုတွင် လှိုင်းသစ်တစ်ခုအဖြစ် ဦးတည်စေခဲ့သည်။
— တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိက ပြည်သူများအတွက် တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်အား အကဲဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။ တရုတ်-အာဖရိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အသိအမှတ်ပြုလောက်ဖွယ် အောင်မြင်မှုများကို မည်သူမျှ ငြင်းပယ်၍ ရမည်မဟုတ်ပေ။
— အာဖရိကနှင့် ကာလရှည်ကြာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိရေး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကတိကဝတ်ကို ထပ်လောင်း ကတိပြုထားသည်။ နိုင်ငံတကာအခင်းအကျင်းများ မည်သို့ပင်ပေါ်ထွက်လာစေကာမူ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် အာဖရိကနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို လိုက်လျှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘယ်သောအခါမျှ ရုပ်သိမ်းသွားမည်မဟုတ်ပေ။
— တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဖရိက၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၏ အင်အား တောင်းတင့်ခိုင်မာမှုရှိရန်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပုံစံအသစ်နှင့် လူသားမျိုးနွယ် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်း တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် အရေးပါသော ထောက်ပံ့မှုများကို ထင်ရှားစေမည်ဖြစ်သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Nov. 27 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping will attend and deliverakeynote speech to the opening ceremony of the Eighth Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) via video link, which is scheduled for Nov. 29 to 30 in Senegal’s capital of Dakar.
— With similar fate in the past andacommon mission, China and Africa have extended sympathy to and helped each other throughout all the years. Together, we have embarked onadistinctive path of win-win cooperation.
— The China-Africa relationship is currently at its best in history. The 2018 Beijing Summit of the FOCAC led toanew wave in developing the China-Africa friendship, with the implementation of its results injecting new vigor into their practical cooperation in various fields.
— Ultimately, it is for the peoples of China and Africa to judge the performance of China-Africa cooperation. No one could deny the remarkable achievements made in China-Africa cooperation.
— Let me reaffirm China’s commitment to its longstanding friendship with Africa. No matter how the international landscape may evolve, China shall never waver in its determination to pursue greater solidarity and cooperation with Africa.
— China and Africa’s collaboration and common development will underscore important contributions to strengthening the power of developing countries, building ofanew type of international relations andacommunity withashared future for humanity. ■
Photo : Members ofaChinese medical team pose foraphoto upon their arrival at the airport in Addis Ababa, Ethiopia, April 16, 2020. (Xinhua/Wang Shoubao)